Umhla My Pet » 7 Iimpazamo Kwintlekele Women Yenza Loo Intshabalalo Nayiphi Amathuba Okosuleleka UbuDlelwane
ukubuyekezwa: Jul. 04 2020 | 2 min ukufunda
Akukho mntu u fe. Inyaniso, ukuthandana bekungayi kuba mnandi kakhulu kangangoko ukuba wonke umntu. nokuba, kukho iindlela enokonakalisa amava ukuthandana. Ezi ngcebiso zingezantsi iimpazamo amabi, ukuba amabhinqa ukuba xa uthandana.
Ukuqalisa ezininzi umfowunelwa kunye ngephanyazo uphendule nayiphi na imbalelwano kuye yonke imiqondiso bathi zifumaneka kakhulu. Amadoda khangela kubafazi ozithembileyo, abo bafuna ngabanye. Nangona unokuba nexhala okanye ufuna ukubonisa umdla mfo yakho, zifumaneka kakhulu kuza liphela zizicheku.
Wonke umntu ufuna ilungelo nomfazi akangaphandle?! nokuba, ukuba kakhulu “kwi-ukuya” ngokwakho, amadoda aya mayicinywe. Kubalulekile ukuba bachithe ixesha uthetha umhla yakho kunye namava akhe kunye nomdla ngokunjalo ukwabelana nowenu.
Soloko kwifowuni yakho
Wena ngomhla ukwazi isakhono uMnu wakho. Ekunene kwaye vice versa. Rhoqo xa ifowuni yakho okrwada njengomntu akafuni lomhla ifowuni yakho, ufuna ukwazi ukuba. Qinisekisa ukuba ifowuni yakho kuphela engxoweni yakho umhla opheleleyo kodwa qiniseka ukuba layo cwaka.
Times itshintsha nomnikelo ukuhlawula ngomhla wokuqala abe yimfuneko. Nangona inkitha yabantu luzakunyanzelisa ngokuhlawula, abaninzi baya kutyhafa ukuba ekungasondezwa ukuba ubuncinane ukwahlula oyilwayo.
Nangona ukuba usele okanye ezimbini ngomhla lulungile ngokugqibeleleyo, ukusela kwemfuneko okanye ukunxila ngomhla kuya kuba ebaleka ubomi bakhe. Hayi nje oku kubonisa ukuba akukakulungeli ukuthandana kodwa vela ukusela kukhokelela kakhulu ukuba kunngeenzeka esithi into ukuze nina kuzisola.
Ukuzama Tshintsha kuye
Ukubheja ubomi bakho uthando kwi ezinokuba ukugonwa yeyona iresiphi intlekele. Ukuthandana umntu ngenxa nje yokuba mhle okanye imali ngexesha uzama ukutshintsha kuye ukuba lomfo wakho ogqibeleleyo kuya ubuhlobo enye ungaziva unomsindo nenzondo.
Amadoda nibuyile kwaphela ngabasetyhini abayinikela imihla kuqala, waya nguwe-na-one-let's-fumana-atshate ngephanyazo. Akukho imvakalelo engcono ngoko emangalisayo umhla wokuqala kodwa oosisi, ukugcina “ndiyakuthanda” iingcinga ngokwakho kwiinyanga zokuqala ezimbalwa. Ukufumana ezinzulu kwaye bevakalisa ezo mvakalelo ngokukhawuleza kakhulu uya kwenza umntu onkcenkceshela.